Bottle Opener ရေခဲသေတ္တာသံလိုက်သည်အသုံး ၀ င်နိုင်သည်။ သင်၏မြှင့်တင်ရေးအမည်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါတိုင်းမှတ်မိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Promo-Flex ရေခဲသေတ္တာသံလိုက်များသည်ကြာရှည်ခံ။ ပေါ့ပါးသည် - ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွက်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်ထူးခြားသောအရောင်းမြှင့်တင်မှုများ။
2D နှင့် 3D ရေခဲသေတ္တာ၏ဒီဇိုင်းသည် ပို၍ ထင်ရှားသောအရာအတွက်အောင်မြင်သူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ HOLLOW BOOKMARK နှင့်အုပ်ထိန်းသူသည် 2D အရည်အသွေးရှိပြီး၎င်းကိုတောက်ပသောသို့မဟုတ်ရှေးဟောင်းအတိုင်းအတာဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အတိုဆုံးလိုင်းများသည်အထူ ၀.၀၁ မီလီမီတာနှင့် ၀.၁၂ မီလီမီတာကဲ့သို့သင့်စာအုပ်အမှတ်အသားတွင်ရှုထောင့် ၂ ခုရှိပုံများကိုပြသရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ် lapel pin ကို
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းရှိရင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာဖိုင်ကိုသာပို့လိုက်ရင်သင့်ရဲ့အရောင်ဒီဇိုင်းကိုအရည်အသွေးမြင့် lapel တံသင်ထဲကော်ပီကူးပြီးအချိန်မီသင့်ထံပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီအရည်အသွေးမြင့်သောအမေရိကန်ထုံးစံတံဆိပ်တံသင် ရရှိနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအပြင်ထုတ်လုပ်မှုကာလကိုသေချာစေပါမည်။
လျှောရွေ့လျားတံသင်သည်အလွယ်တကူဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်။ သေးငယ်သည့် hinged devices များတပ်ဆင်ထားသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စာသားများနှင့်ကြွေးကြော်သံများများများရှိပါကထိုစာလုံးများကိုပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖော်ပြရန်သုံးဘက်စလုံးရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အယူအဆဖြစ်သော်လည်းတိကျမှန်ကန်ပြီးချောမွေ့သောလှုပ်ရှားမှုတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် lapel တံသင်ကိုအထူးပြုလုပ်သည်။ အောက်ပါတို့သည်အချို့သောဘုံဌများ ...
LED light ကို PCB တွင်သွပ်သတ္တုစပ် (သို့) သံမဏိ lapel pin ပေါ်တွင်တပ်နိုင်သည်။ နောက်ဘက်ရှိ fittings များသည် butterfly clutch သို့မဟုတ် magnet ဖြစ်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Photo Etched Pins? ပေါ့ပါးသော lapel တံသင်ကိုအသေးစိတ်နှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြလိုပါကဓာတ်ပုံစွဲတံများပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည်။ ပုံသွင်းထားသော Cloisonne တံသင်များနှင့်မတူဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ထားသော Lapel Pins သည်ဒီဇိုင်းကိုသတ္တုမျက်နှာပြင်သို့ခေါင်မိုးနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းပုံသွင်းခြင်းမပြုလုပ်ဘဲထွင်းထုထားသည်။ ဤသည်ဒီဇိုင်းကိုပြသနိုင်အသေးစိတ်ပမာဏကိုတိုးပွားစေပါသည်။ သင်၏ဒီဇိုင်း၏သတ္တုအခြေခံကိုစုပ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုစတင်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုအရောင်ကိုဖြည့်ပြီးမီးလောင်လိမ့်မည်။